Mifantoka amin'ny Major
Mijoro eo amin'ny tantara lava
Silvery Dragon dia mifantoka amin'ny fikarohana momba ny fanaovana tariby tariby vy, ny fikarohana ara-teknika momba ny fitsaboana hafanana ary ny famokarana vy vita amin'ny simenitra mandritry ny telopolo taona mahery. Silvery Dragon, Shinoa tsy miankina sy manana ny maha izy azy amin'ny orinasam-panjakana, dia malaza amin'ny "fifantohany amin'ny toetr'andro" sy ny toerana misy azy eo amin'ny tantara "manerantany.
Miorina any Shina Diabe ho an'izao tontolo izao
Nandritra ny telopolo taona mahery, miorina amin'i Shina ary miankina amin'ny tombony lehibe efatra ananantsika amin'ny fananana akora, fitaovana, kolontsaina ary tsena, dia miasa mafy izahay ary miezaka mamorona, izay mandray anjara betsaka amin'ny lalamby sinoa, arabe, fanamboarana fifamoivoizana an'habakabaka, fanerena be famatsian-drano, paositry herinaratra, takelaka fananganana trano ary tetikasa misy fihenjanana ary mahazo zava-bita tsara. Hatramin'ny 1996, Silvery Dragon dia nanondrana ny vokatra tany Bangladesh voalohany, ary mihoatra ny folo taona ny fanitarana ny tsena, dia namatsy ny vokatra mihoatra ny firenena 90 izahay, mitazona hatrany ny satan'ny volan'ny fanondranana lehibe indrindra ao Shina. Hatramin'ny taona 2008, miaraka amin'ny habetsaky ny fanondranana mihoatra ny iray hetsy taonina isan-taona, Silvery Dragon dia lasa iray amin'ireo mpanondrana vokatra PC lehibe indrindra eran'izao tontolo izao.
Andian-vokatra feno, mizana lehibe
Eo ambanin'ny fitakiana mahery vaika eny an-tsena, Silvery Dragon dia manitatra ny fahaizan'ny famokarana tsy tapaka, manana andalana tariby PC 20, tsipika barin'ny PC 6, tsipika 10 PC strand, 6 PE bar & strand lines, mihoatra ny 20 andiana fitaovana fanodinana lalina ho an'ny cut- vokatra PC lava & misy kofehy. Miaraka amin'ny karazana maherin'ny 100, PCCP, mitazona, tariby PC tadin-taolana, tsotra, tadin'ny tadin-taolan-tehezana PC, roa, telo-, fito tariby fito, mifono vy, tadin-taolana, vokatra PC vita amin'ny PC PEgalvanized ary ny fahaizan'ny famokarana 650,000 taonina isan-taona, SilveryDragon dia eo amin'ny toerana misy ny ankamaroan'ny karazana vokatra sy ny refy lehibe indrindra.
R&D sy fanavaozana, famolavolana fenitra
Ny R&D sy ny fanavaozana no laharam-pahamehan'ny fahavelomantsika sy ny fampandrosoana, ary koa ny tombony lehibe indrindra. Izahay dia namolavola karazana vy vaovao mifintina, maty manao sary karbida simenitra, fitaovana fanaovana sary, fitaovana fitsaboana hafanana ary torimaso beton mihantona, fantsona PCCP, andry herinaratra, takelaka misy gorodona sns ... amin'ny indostrian'ny thedownstream. Mandritra izany fotoana izany, mandray anjara sy mifehy ny famolavolana fenitra vokatra marokoroko nasionaly marobe, fenitra wirerod, ary fenitry ny vokatra simenitra ny Silvery Dragon.
Feno hafanam-po, manompo amin'ny fahatsoram-po
Ny vahoaka Dragon Silvery dia maneho fitiavana tsy manam-petra, hafanam-po tanteraka ary tsy fivadihana lehibe amin'ny mpanjifanay, ny firenentsika ary ny fandriampahalemana sy ny fampandrosoana an'izao tontolo izao. Amin'ny fikarohana, famokarana, varotra, serivisy ary ny dingana rehetra, izahay dia manaraka ny foto-kevitra fototra amin'ny tsy fivadihana, ezaka, fahaiza-mamorona, fikirizana amin'ny famoronana lanja ho an'ny mpanjifa ary mifantoka amin'ny fitsipiky ny kalitaon'ny "Fahaiza-mitarika, fikatsahana tsaratsara kokoa". iraka mendri-kaja "amin'ny anaran'ny Sina, LOHATEN'IZAO TONTOLO IZAO"